The kpatara enweghị nke ịhụ nsọ (ma e wezụga afọ ime)
ị bụ ebe a: Home afọ ime The kpatara enweghị nke ịhụ nsọ (ma e wezụga afọ ime)
-Enwu n'anya, aghụghọ akụkụ ọnụ ọgụgụ, amara na amara - niile a anyị ji ọdịdị.
Otu ugboro n'ọnwa, ọ bụla nwa agbọghọ, ndị inyom na-abịa n'oge dị oké egwu. Akpa ọkara nke og na ovaries na-emepụta estrogen nọ n'ọrụ, nke enyere ndị tozuru okè na follicle na egg. N'otu oge ahụ akpanwa nke nta nke nta na-aba ụba n'ime oyi akwa - na endometrium.
Ke ufọt ufọt okirikiri ovulation: egg-ahapụ follicle, ya onwe ya follicle na-ghọọ ndị corpus luteum, nke na-amịpụta bụ mmiri ọgwụ progesterone, Ya onwe ya, bụ maka na ime. N'ihe, Ọ bụrụ na njikọta spam ya emebeghị, na corpus luteum nwayọọ nwayọọ na-akwụsị na-arụ ọrụ na kpamkpam, akpanwa jụrụ nweworo endometrium, amalite n'ọnwa. Ọ bụrụ na afọ ime emee, oké egwu ụbọchị anọghị.
Healthy nwaanyị og dịruru 21 ka 35, adabere n'onye ọ bụ e ji mara organism.
Og - a na-aga n'ihu na nnọọ mgbagwoju anya usoro. na e nwere ihe ọzọ karịa nke enweghị kwa ọnwa afọ ime. ọ bụ ezie na kacha akpata ime karịsịa n'ọnwa mbụ является именно отсутствие месячных. Adịghị ezere si ha, ka e mee ihe ha n'ezie. Ọ bụla odida na nwaanyị ahụ nwere ike ịbụ ihe na-akpata ọrịa. Tụlee ha:
1. nchegbu. Family scandals, esemokwu na nsogbu na-arụ ọrụ, overwork, ehighị ụra, ule na ndị ọzọ na iche echiche nsogbu - dịghị mma ka nwanyi ahu. Ihe na-eme: ma ọ bụrụ na i nwere ike, Rụtụ aka na ọkà n'akparamàgwà mmadụ, anya n'ihi na ndị na-akpata nsogbu na idozi ha, Gbalịa inwe ihi ụra nke na fọdụrụ oge.
2. ibu ibu. Enweghị arọ, nakwa dị ka ngafe nke, Ọ na-ebute a na-egbu oge ịhụ nsọ. Nkịtị toworo eto ahụ nwaanyị nke nkezi elu-ekwesịghị itu erughị 47-50 kg. Extra kilos nwere ike ọ bụghị naanị na kwụsị og, kamakwa akpaghasị metabolism, -eme ka obi na nsogbu, ìhè, urogenital usoro, wdg. The enweghị arọ agaghị nanị na ọtụtụ igbu oge, kamakwa ime ka akụkụ na kwa ọnwa ruo mgbe ebighị ebi, nke nwere ike ịbụ kpamkpam na-egbu egbu. Ifelata ahụ ike, ma echefukwala banyere iri ezigbo nri ọ bụla ikpe.
3. oké mmega. Echefukwala banyere, M ga-eme ihe a nwoke, na nwaanyị. Oke egwuregwu nwekwara ike ime ka kpatara enweghị nke kwa ọnwa ma e wezụga afọ ime.
4. adịghị ala ala ọrịa. Ọ dịghị mkpa ikwu ihe ọ bụla - na-agba ọsọ na nke dọkịta!
5. Emergency mmiri ọgwụ mgbochi afọ megide butere ime ọkwa ọgwụ n'oge ọrịa na-eme ka a na-egbu oge ịhụ nsọ.
6. ihu igwe. Mberede mgbanwe ihu igwe nwere ike imetụta ma ndị na-egbu oge ịhụ nsọ, na ha na mberede ọdịdị.
7. Abortions na miscarriages. Mgbe ọgwụ aka n'ihe ndị ahụ, mucous eriri akpa nwa curettage agbake site nile dị iche iche. O nwekwara ike ime ka egbu oge ịhụ nsọ.
8. Nkwụsị mmiri ọgwụ gbochie afọ. Mgbe na-anata ndị a ọgwụ ọjọọ eme ihe, na ovaries kwụsị ya na ọrụ ya na mmepe nke egg. Ya mere, Mgbe nkwụsị dị otú ahụ ọgwụ ọjọọ eme ihe, na ovaries nwere ike ka na- 1-3 n'ọnwa "breeki". Na ọtụtụ ndị inyom weghachiri eweghachi niile site n'onwe ya na nke a, ma ọ bụrụ na ihe dị oké nchegbu, kwesịrị ịhụ dọkịta.
9. climacteric. na oge, Mgbe nwaanyị ahụ completes ogbugbu nke ọrụ na mmepe nke egg. Amalite niile dị iche iche, tumadi mgbe 40 afọ.
10. Oké mmanya, sịga na ọgwụ ọjọọ.
Gịnị bụ ihe ịrịba ama nke afọ ime n'ọnwa mbụ?
Ihe ịrịba ama nke afọ ime na-egbu oge ịhụ nsọ
ihe ịrịba ama nke afọ ime – ntọhapụ
Olee otú ọtụtụ ụbọchị mgbe a tụụrụ ime ya, akpa ihe ịrịba ama nke afọ ime?